Ukwelashwa kokushisa kwelanga ekhaya
Uma kufika ihlobo, sichitha isikhathi esiningi emgwaqweni: sisebenza e-dacha, siya olwandle, sihambahamba edolobheni, sihamba nabangani emagodini. Kubonakala sengathi wonke umuntu uyazi ukuthi ukukhanya kwelanga kuyingozi kangakanani ngalesi sikhathi, ukhohlwe ngezinkinga ezinjengokushisa kwelanga. Ukwelapha ekhaya, nokuthi singayisebenzisa kanjani esikufunda kulesi sihloko.
Wonke umuntu uyazi ukuthi ikhambi lokuqala lokushisa yilona ukhilimu omuncu. Udinga ukusika wonke umzimba oshiswe, ulinde ihora eli-1, ubomvu buyokwehla kakhulu futhi ubuhlungu budlula. Uma kungekho ukhilimu omuncu oseduze, ungasebenzisa amazambane. Toss amazambane, grate, cindezela ijusi, moisten i-napkin nale juice bese wafaka esikhunjeni esishisayo. Lesi sidakamizwa sinomphumela wokulwa nokuvuvukala. Futhi ungaxuba ama-potato ujusi nofulawa wekolweni bese ubeka imizuzu engu-20 ebusweni obusayo.
Ukushona kwelanga: ukwelashwa
Labo abathanda ukumba ezweni, banezinkinga zabo ze-dacha - ukushaya, ukunxusa, ukusika, njalonjalo, kuzosiza ukubhekana nazo amazambane. Esikilweni esithathelisayo sokusebenzisa isigamu se-tuber yamazambane, kuzosusa ukuphazamiseka, ukuvuvukala, kuzosusa isilonda.
Ekhaya, usizo lokuqala lokushisa luyoba ijusi likakhukhamba, luzokwenza ukunciphisa ubomvu, ukuvuvukala, nokukhulula ubuhlungu.
Siza amakhambi okwelapha. Lungisa i-decoction noma ukumnika kwamakhemikhali omakhemikhali. Ingilazi yamanzi abilayo iyogcwalisa isipuni se-chamomile, igcizelele isigamu sehora. Lungisa ama-diski added, okusihambisa ngalo mhlu futhi sisebenzise ukushisa. Noma sizobe silungisa i-decoction esivela ku isipuni se-chamomile esomile, uthele ingilazi yamanzi, ushiye imizuzu engu-2 futhi ake siphuze imizuzu engu-45. Sizofaka lo mhlu ngamanoni noma yikuphi ukhilimu. Uzobhekana nokucasuka nokushiswa kwesikhumba.
Ukwelapha ekhaya ukushisa ilanga
Thatha amazambane ama-3 bese uyifake efaneni. Khona-ke sizohlanza futhi sivuthe ukhilimu omuncu. Nale mafutha, smear the burn bese ushiye it hora. Bese sigeza ngamanzi afudumele. Ukwelashwa okunjalo kusiza ukubhekana ngokushesha nokushisa kwelanga, futhi ngosuku olulodwa usuvele usuqalile ukushisa ilanga. Uma ama-bubbles amancane evela esikhumbeni, siwagcoba nge-slurry yamazambane ahlaza. Shiya imizuzu engu-40.
Ukwelapha ekhaya lakudala ngokushisa. Bilisa amanye amaqanda abilisiwe, khipha ama-isikhuni kuwo futhi uwafake epanini lokuthosa, ekushiseni okuphansi, kuze kube yilapho sithola amafutha ashisayo omnyama. Uma amafutha anjalo ehlanganiswa nezindawo ezishisiwe, azophulukisa ngokushesha. Ngaphezu kokushisa kwelanga, le remedy izosiza ngokushisa okukhulu.
Beka izindawo ezishisiwe i-gruel ye-pumpkin. Ngaphezulu kwe-gruel sibeka i-gauze, ukuze ngaphansi komthelela we-oksijeni i-compress ayimile. Ngemuva kokuqala umuntu uzozizwa kangcono kakhulu.
Ukushona kwelanga, amathiphu :
Indlela yokuphatha ukushisa kwelanga ekhaya
1. Faka ekamelweni, ngoba emva kokushisa, uma usetshonalanga, lokhu kuzobe kubi kakhulu isimo.
2. Uma kunezibhansela, lokhu kubonisa ukuthi isikhumba sonakaliswe kakhulu. Uma izibhansela zithinteka ezindaweni ezinkulu zesikhumba, isibonelo, isisu noma isandla, ngokushesha shayela i-ambulensi.
3. Ukunciphisa ubuhlungu, ukugeza noma ukugeza okubandayo.
4. Phatha isikhumba esishisayo nge-agent epholile noma ijusi le-aloe, ungagcini ukushisa ngemifino noma ibhotela.
5. Ukunciphisa ubuhlungu bokushisa, sebenzisa ama-painkillers, banikezwa ngaphandle kwemithi, isibonelo, i-acetaminophen noma ibuprofen. Uma kudingeka imali eqinile, xhumana nosizo noma udokotela.
6. Ukushisa kuvame ukuhambisana nokuvuvukala. Ukushisa okukhulu entanyeni nasebusweni kungaholela ekuphefumuleni okunzima. Kulesi simo, ngokushesha shayela i-ambulensi.
7. Ukushisa okukhulu emanzini ezinyawo nezandla kungabangela ukuvuvukala okukhulu, okuzophazamisa ukugeleza kwegazi okujwayelekile. Uma kwenzeka ukulahlekelwa ukuzwa kwezinyawo ezithukuthele nezandla, ukuxubha, ukuphazamiseka, ukutshela udokotela ngokuphuthumayo.
8. Uma kwenzeka ukushisa, gqoka izingubo ezingavamile, ugqoke izingubo ezenziwe emikhondweni yemvelo, isilikhi noma ukotini, ama-synthetic noma ama-hard fabrics kuqinisa ukucasula isikhumba, izingubo kufanele ziqedwe mahhala.
9. Ukukhanya okukhulu kwelanga kungabangela ukushisa okushisa nokushisa kwesibindi. Uma izindlela zokushisa zingakusizi, udinga ukubona udokotela, ikakhulukazi uma umkhuhlane, ukuhlanza nokunye okunjalo, futhi uma ingane ishisa ukushisa ilanga.
Ngokwemvelo, ngamunye wethu uyakwazi ukuphatha ukushisa kwelanga, futhi kufanele kube yini ukwelashwa ekhaya okushisayo. Kodwa kungcono ukungavumeli, uma wazi ukuthi uzoba ilanga isikhathi eside, gqoka ingubo, sebenzisa izikrini zelanga, uphuze uketshezi oluthe xaxa.
Ingabe kukhona ukungezwani komzimba emakhazeni nokuthi ungalwa kanjani?
Isicelo se-dandelion emithi yomuthi
Kuwusizo kangakanani i-leaf extract ye-aloe vera?
Indlela engcono kakhulu yokukhipha i-hangover
Izici zokuziphatha komkhwenyana omuhle
Amazambane nge-curd ayisikhilimu
IRiphabhliki yaseCroatia iparele le-Europe Ephakathi
Ukuphila nomsebenzi kaBernard Shaw
Le mikhuba engu-14 izokujabulisa futhi uphile
Kuthiwani uma uthanda umngane wakho omkhulu?
Isaladi nama-utamatisi kanye ne-nut dressing